Ji anapụta accelerated elu-nchapụta na-HD workflows, n'ezie na-mmekota, ma dị ike media management, uchu Media andiwet eliminates na-ewe oge aga-eme otú ọrụ nwere ike ilekwasị anya na-agwa oké akụkọ na ike ngwaọrụ dị iche iche na mmetụta. Iji gbatịa ụkwụ na aka nke a software, e nwere otutu bara uru plugins popping-elu. N'ebe a, anyị ga-amasị ịkọrọ top 6 uchu Media andiwet plugins n'oge usoro nke nkiri edezi.
Boris Continuum Comprehensive 9 AVX enye kasị ọma VFX na compositing nkwụnye na collection maka uchu Media andiwet. A oke 200+ nzacha ndị n'ihi na ọrụ gụnyere 3D mmetụta dị ka extruded Text, 3D bit mmetụta na ndị ọzọ dị ka oyiyi mweghachi ngwaọrụ, oghere flares na illuminations, na-agbata n'ọsọ-emeri chroma Keying na compositing, a zuru ezu collection nke na agba mma ngwaọrụ, oge dabeere metụtara dị ka Optical stabilizer, ogologo na n'ọnọdụ results, na blurs, glows, na cinematic metụtara. All Bcc AVX nzacha ka ojiji nke ma multi-nhazi ma ọ bụ OpenGL ngwá ike ọsọ maka kenkwukorita results imewe zutere.
# 2. Digital Nnupụisi Pro Maintenance Ngwaọrụ n'ihi na Media
Pro Maintenance Equipment (n'oge FCS Maintenance Pack) bụ onye ike mkpọ kere ka ị na-Final Cut Workshop, Final Cut Pro X, uchu Media dere, uchu Symphony ma ọ bụ Adobe Premiere Pro Mac na-agba ọsọ na ezigbo arụmọrụ na enyemaka ndibiat nsogbu mgbe ha iputa.
# 3. The GenArts safaya
The isii nkwụnye bụ maka agbakwunye metụtara gị fim ma ọ bụ video. The Conoa EFX Nọgidenụ Agba plugin ikike dị 4 shades ga-ewepụ ma ọ bụ wee n'ime media. Isii nnọọ pụrụ iche plugins ịgbakwunye obere mmetụta ka fim ahụ na video na i nwere ike ide ihe ọ bụla nke n'ígwé dị ka Alfa ọwa na-eji ire ụtọ gị video! Right now kwukwara, sị: Conoa EFX ga na-Agba plugin na-enye ohere n'elu 4 agba na-subtracted na na-na na media. Ị nwere ike lelee sample ebe a na lelee gallery page.
# 5. Ebili WLM Plus Loudness Meter
The Ebili-WLM Plus Loudness Meter plugin enye nkenke loudness akụkụ, metering, ukpụhọde na mgbanwe ngwaọrụ nke usoro ihe omume, emegharị trailers, egwuregwu vidio, packaged media na ndị ọzọ.
# 6. Digital Nkiri Ngwaọrụ Super ukwu maka Video
The DFT Super ngwugwu n'ihi Nkiri / Video na-agụnye ọtụtụ ihe mejupụtara gbasara mkpokọta Pro, Nkiri ebuka, Detuo, ụzarị, Nụchaa & zMatte!
> Resource> Video> Top 6 uchu Media andiwet Plugins maka Movie edezi